फेरि ह्वातै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Sanchar Kendra
फेरि ह्वातै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ । आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य ह्वातै बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुन तोलामा अधिकतम ६०० रुपैयाँले र चाँदी तोलामा ३५ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
योसँगै आज बजारमा सुन प्रतितोला ९१ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने चाँदी एक हजार २३० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत शुक्रबार बजारमा सुन प्रतितोला ९० हजार ९०० रुपैयाँ र चाँदी एक हजार १९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, यता आज तेजबी सुनको मूल्य समेत ६०० रुपैयाँले नै बढ्दै ९१ हजार रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी युरो एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ । बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।